Cuntooyinka Cidhib-tirka Maqaayada oo burbursan Qaybta 1 - Cunnooyinka Lugaha
Cunnooyinka Cuntada Heels Resundown Qaybta 1
Tirinta ayaa si rasmi ah u bilaabantay! Cunnooyinka Ciribta 2018 bil ka yar ayaa naga xigta. Maaddaama ay taariikhda munaasabaddu soo dhowaatay waxaan dooneynay inaan idinla wadaagno xoogaa macluumaad ah oo ku saabsan dhammaan maqaayadaha maxalliga ah oo aad fursad u heli doontid inaad ku baarto Cunnada Cidhibtooda. La soco si aad wax badan uga ogaato shanta makhaayadood ee ku haray maqaayadaha Meals on Heels ee Rundown Part 2!
Markii ugu horeysay abid Bacio wuxuu ku soo bandhigayaa cuntadooda cusub Meals on Heels, wiilkuna waanu faraxsanahay! Bacio wuxuu ku faanaa oo keliya nafsaddiisa u adeegidda cunno yaab leh, laakiin sidoo kale martigelintooda aan fiicnayn. Khibrad dhab ah oo gaar ah ayaa laga fili karaa marka xigta ee aad Bacio ku joojiso Minnetonka. Waxyaabaha kale ee aad ka filan karto Bacio waa cunnooyinka laga helo deegaanka oo ay weheliyaan cuntooyinka asalka ah ee laga sameeyay xoq. Waxyooshoodu waxay u dhaxeysaa Talyaaniga, ilaa Mediterranean, ilaa Aasiya. Iyada oo ay jiraan noocyo badan oo saameyn ah ayay na weeydiinayaan waxyaabaha alaabtaan loogu adeegi doono Cunnooyinka Cidhibtooda sanadkan!
Faransiiska Meadow Bakery
Sannadkii saddexaad oo isku xiga French Meadow Bakery & Cafe waxay u keeni doonaan qaababkooda dabiiciga ah Beer-ilaa-Miiska Cunnooyinka Cidhibta! In ka badan 30 sano Faransiis Meadow wuxuu siin jiray Magaalooyinka Mataanaha ah cunno maxalli ah oo macaan. Waxay xiriir la leeyihiin in ka badan dersin beeraha maxalliga ah ah oo iyaga siiya khudaarta si dabiici ah u koray, dhirta, hilibka, bur, ukunta, iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Sawirka afka-waraabinaya ee hoose waa waxa ay ku karbaasheen Cunnooyinka Cidhibtii la soo dhaafay: Stonebridge Farm hilib lo'aad leh barandho la shiilay oo la dubay iyo kalluunka fardaha leh. Waxaan aad u rajeyneynaa cuntada macaan iyo tan gaarka ah ee ay u keeni doonaan Cunnooyinka Cidhibtooda sannadkan!
Makhaayada Gandhi Mahal waxay u keeneysaa cunnadooda buuxa ee Bangladesh / Hindida Meals on Heels! Kaliya maahan Gandhi Mahal inuu sameeyo qaar ka mid ah cuntada Hindida ugufiican magaalooyinka Mataanaha, ganacsigooda runti waa mid lagu qanco. Waxay ku sii hayaan waara ilaa heer cusub iyaga oo u maraya nidaamkooda aquaponics-ka, hindisaha beerashada magaalooyinka iyo magaalooyinka, iyo dadaallada qashinka eber. Mabaadi'da Mohandas Gandhi oo ah tusaalahooda, waxay rajeynayaan inay isu keenaan beel ka mid ah caqiidooyinka kala duwan ayna abuuraan goob nabadeed oo isu imaatin ah. Haddii aadan sugi karin illaa Ogosto si aad u tijaabiso Gandhi Mahal cuntadooda qadada ah ee aad wada cuni karto waa ikhtiyaar aad u fiican oo qado ah oo la bixiyo maalin kasta laga bilaabo 11:30 subaxnimo ilaa 3:00 galabnimo, iyadoo suxuunta maalin walba la beddelayo.
Markii ugu horreysay abid Makhaayadda 'Just / Us Restaurant' waxay ukeeneysaa noocyadooda maqaayada u gaarka ah Meals on Heels mana ku farxi karno inay nala soo galaan! Haddii aadan maqlin Just / Us iyo sida ay u soo cusbooneysiinayaan ciyaarta maqaayada, ka dib dhageyso. Just / Us ayaa ka badan makhaayadaada caadiga ah. Waa dadaal wada shaqeyn ah oo ay sameeyeen kuugga cunnada raba inay dib u cusbooneysiiyaan warshadaha makhaayadaha ayna u beddelaan dhaqanka cunnada wanaagsan. Liistadooda ayaa had iyo jeer is beddeleysa iyadoo ku xiran hadba helitaanka maaddooyinka iyo himilooyinka kuugga, iyo sidoo kale xaqiiqda ah inay had iyo jeer ku casuumaan cunto kariyeyaasha maxalliga ah inay la wadaagaan booskooda. Waqti kasta oo aad go'aansato inaad ku cunteeysid Just / Us waxaad hubtaa inaad leedahay khibrad cusub. Bisha Luulyo cuntadooda dariiqyada ka socota adduunka oo dhan waxaa ku dhiirrigeliya bisha Julay. Ma Kaliyaa Tahay, mise sidoo kale miyaad ku faraxsan tahay inaad ogaato nooc ka mid ah noocyada nooc ee ay go'aansan doonaan inay ugu adeegaan Cunnooyinka Cidhibta?
In kasta oo cunnadu had iyo jeer tahay barta ugu sarraysa dhacdada, runtii qaybta ugu fiican ayaa ah in 100% ee dakhliga uu aadayo Cuntada Lugaha si aan ugu sii adeegno dariskeena waayeelka ah. Waxaan sugeynaa fiid aan la iloobi karin oo ka buuxay cunto iyo cabitaan aad u fiican, madadaalo, raaf, iyo tan ugu fiican: habeen isku imaatin si aan u taageerno Cuntooyinka Lugaha! Cuntadaada ku Hel Cidhib tigidhada hadda!
19 Luulyo 2018